Ananda Thuriya’s Death Song (1) | သင္ကာဘုန္းျမင့္-Thinker Bhone Myint
2009 Korean Gov Scholarship →
December 29, 2008 · 8:40 am
Ananda Thuriya’s Death Song (1)
ပုဂံခေတ်က အနန္တသူရိယအမတ်ကြီးရဲ့ ကွပ်မျက်အံ့မူးမူးမှာ ရေးသွားတဲ့ မျက်ဖြေလင်္ကာဟာ မြန်မာစာပေမှာ ထင်ရှားဆဲပါ။ တရားသဘောတွေ ပြည့်နေတဲ့ ဒီလင်္ကာကြီးကို မြန်မာပညာရှင်နှစ်ဦးနဲ့ အင်္ဂလိပ်လူမျိုးပညာရှင်နှစ်ဦးတို့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို ပြန်ဆိုကြတာကို အရသာခံကြည့်စေချင်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ကဗျာကျော် J. Shirley ရဲ့ “Death the Leveller” နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ဖို့ နောက်ဆုံးမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ကဗျာမူရင်းရော ဘာသာပြန်တွေရောကို ဒေါက်တာခင်မောင်ညွှန့်ရဲ့ An Outline History of Myanmar Literature (Pagan Period to Kon-Baung Period) က ယူပါတယ်။
(၁) သူတည်းတစ်ယောက်၊ ကောင်းဖို့ရောက်မှု၊
1. When one attains prosperity
Another is sure to perish
(၂) ရွှေအိမ်နန်းနှင့်၊ ကြငှန်းလည်းခံ၊
2. Happiness of life as king
Havingagolden palace to dwell in
Court-life, with an host of Ministers
Enjoyment Shadow peace,
No break to felicity –
Is butabubble mounting for a
moment to the surface of the ocean.
(၃) ကြင်နာသနား၊ ငါ့အားမသတ်၊
3. Though he kill me not,
But in mercy and pity release me,
I shall not escape my Karma
Man’s stark-seeming body
Lasteth not ever,
Verily it is the nature of every
Living thing to decay.
(၄) ရှိခိုးကော်ရော်၊ ပူဇော်အကျွန်၊
သွေးသည် နိစ္စာ၊ ငါ့ခန္ဓာတည်း။
(4) Thy slave, I beg
But to bow down in homage
And adore thee!
In the wheel of Samsara
My past deeds offer me vantage,
I seek not for vengeance
Nay, Master, mine awe of thee is
If I might, yet I would not touch thee
I would let thee pass without scathe
The blood is transitory, as well
The elements of my body.
G. H. Luce
အထက်မှာ အင်္ဂလိပ်လို ပြန်ဆိုချက်က ဆရာကြီး G.H. Luce ရဲ့ လက်ရာပါ။ အောက်မှာ ဆက်ဖော်ပြမယ့် ဘာသာပြန်က R.F. Andrew St. John ရဲ့ လက်ရာ ဖြစ်ပါတယ်။
(1) Yes, he is one who, wealth attained,
Shall pass away and disappear;
‘Tis Nature’s Law.
(2) Within his golden palace hall,
Surrounded by his Loards in state
He sits serene
But King’s delights, like eddies small
On ocean’s faceamoment seen
Are but for life.
(3) Should he slow pity, and not slay,
But set me free, my liberty
Is Karma’s work.
Of mortals here the elements
Last not, but change and fall away;
(4) The sure result of supplicant acts
Or prayers, I wish not to transfer
To future lives:
T’escape this fate, past sin’s result,
Is my desire. Calmly I’ll waite
Thee, gentle lord, I blameless hold,
Freely to thee I pardon give.
‘Tis not thy deed.
Danger and death are constant foes
And in this world must ever be
R.F. Andrew St. John
နောက်ပို့စ်ကျမှ မြန်မာပညာရှင်နှစ်ဦးရဲ့ ဘာသာပြန်လက်ရာနဲ့ Shirley ရဲ့ကဗျာကို ဖော်ပြပါမယ်။
Filed under Literature, Poem
0 responses to “Ananda Thuriya’s Death Song (1)”
သိပ်ကောင်းတယ်ဗျာ.. အဲဒီကဗျာကို တစ်ကယ့် ဒဿန သဘောတွေပါနေလို့ မြန်မာဘာသာနဲ့လည်း ကြိုက်တယ်. အခုလို အင်္ဂလိပ်လိုပါ ဖတ်ခွင့်ရတော့ အတိုင်းထက် အလွန်ပါပဲဗျာ။
“သူတည္းတစ္ေယာက္၊ ေကာင္းဖို႕ေရာက္မူ” လို႕ မွတ္ဖူးပါတယ္ ကိုသင္ကာရွင့္။
ကြ်န္မ အမွတ္မွားရင္လည္း ျပင္ေပးပါ။
ဘာသာျပန္ကဗ်ာေလး ၂ပုဒ္ အတြက္ေက်းဇူးပါ။
Sandar> Sorry Ma Sandar. It’s wrong typing. Now I correct it.